Maxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM ee is-mari waaga doorashada? | Banaadir Times
HomeUncategorisedMaxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM ee is-mari waaga doorashada?
Golaha Ammaanka QM ayaa shalay kulan deg deg ah ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan is-mari waaga ka taagan doorashada dalka, xilli muddo xileedka uu ka dhammaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyayaasha Soomaalida inay si deg deg ah dib ugu billaabaan wada-hadalladooda, ayna u wada shaqeeyaan danta shacabka Soomaaliyeed, si ay heshiis uga garaaan doorashooyinka ayada oo aragtidu tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashooyinka,” ayaa lagu yiri qoraalka Golaha Ammaanka.
Previous articleWaaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo farriin culus u dirtay madaxda Somalia
Next articleKenya oo ka digtay in uu dheraado khilaafka kala dhaxeeyo Soomaaliya